जेठ १९ को कालो रात सम्झदा… — News of The World
निलकण्ठ तिवारीजेठ १९, २०७५
१९ जेठ, काठमाडौं । आज भन्दा ठिक १७ वर्ष अगाडि अर्थात् २०५८ जेठ १९ गते नेपालले नयाँ कोतपर्व व्यहो¥यो । शुक्रबार साँझ ९ बजे तिरको दरबारभित्रको घटना राती ११ बजेपछि सनसनी फैलियो । न त्यतिबेला फेसबुक थियो न त मोबाइल टेलिफोनको नै पर्याप्तता । ल्याण्डलाईन टेलिफोनले मान्छेका निद खल्बल्याउन थालेका थिए । न कसैले सोचेको न त अनुमान गर्न नै सक्ने ।
मानव अधिकारवादी, बहुदलवादी र राष्ट्रवादी छवि बनाएको भनिएका राजा विरेन्द्रको हत्या गरिएको खबर विदेश बस्ने नेपालीहरुबाट बढी हल्ला भयो । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले घटनालाई सम्प्रेषण गरेपछि विदेश बसेका नेपालीले पुष्टि गरेंझै गरी फोन गरी रहँदा पनि धेरै उपत्यकावासीलाई पत्यार लागेको थिएन । दरबारमा त्यस्तो ठूलो घटना घटेपछि रातिको समयमा बाहिर निक्लने आँट धेरैलाई कम थियो । रातभरी साउती गरेर बस्नुभन्दा उपत्यकावासीाई सू–सूचित हुने अरु खासै मौका मिलेन ।
जेठ २० गते शनिबार बिहानको नेपाल टेलिभिजनले लगातार शोक धुन बजाउन थालेपछि पुष्टी भएको लभगभ अनुभूति भयो । विहानको समयमा क्रमश ः मानिसहरु गल्ली, चोक, टोलमा जम्मा हुने क्रम सुरु भयो । मानिसहरुका मुडिएका टाउकाले सडकलाई ढाक्दै गयो ।
करिब २ हजार बढी सुरक्षाकर्मीको कडा सैन्य सुरक्षाभित्र रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र अकल्पनिय, अप्रत्याशित, विभत्स र दुःखद घटना घटेपछि राजदरबार हत्याकाण्डका बारेमा नेपाल र संसारभरी धेरै प्रतिक्रियाहरु आए । गिरीजाबाबु नेतृत्वको सरकारमा गृहसहित उपप्रधानमन्त्री सम्हालेका रामचन्द्र पौडेलले युवराज दिपेन्द्रबाट गोली चलाएको भनि विदेशी संचारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएपछि राजा विरेन्द्रका शुभचिन्तकहरु गिरीजा र रामचन्द्र विरुद्धमा उत्तेजक बन्न पुगे ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश केशव प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाट र एमाले महासचिव माधब कुमार नेपाल लगायतको जाँचबुझ कमिटी बनाएर घटनाको छानविन गर्ने बताईएपछि स्थिति क्रमश तनाबमुक्त हुँदै गयो । यद्यपी एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल त्यो कमिटिबाट बाहिरीए भने तारानाथ रानाभाटको भटट प्रस्तुतिले बिशेष ठाउ पनि पायो ।
सोहि दिन (शुक्रबार) साँझ ६ बजेको समयमा बडागुरुज्यू नयनराज पाण्डेको डिल्लीबजारस्थित घरमा पुगेर फर्केपछि शुक्रबारको साप्ताहिक रात्रीभोजमा राजदम्पत्ती सहभागी भएको जनाइएको थियो । त्यतिबेला दिपेन्द्रको विहे प्रसंगमा डिल्लीबजार पुगेकोले ‘जसरी पनि देवयानी’ भन्ने दिपेन्द्रलाई रिस उठेर सो घटना घटाईएको प्रचार गरिएको थियो । प्रचार जे जसरी भए पनि सो फायरिङका बारेमा विश्लेषकहरुले दिपेन्द्र एक्लैले उत्तेजनाबाट घटाउन नसक्ने घटना भनेर पनि बाहिर आएको थियो ।Aimed Firing र Accidental Firing मध्ये छानेर हान्ने फायरिङ अर्थात् Aimed फायरिङ भएकोले नै राजा विरेन्द्रको वंश (विरेन्द्र, ऐश्वर्य, दिपेन्द्र, श्रुति र निराजन) को हत्या भएको भनिएको थियो ।
तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र सो दिन पोखरामा रहेको र व्यवसायिक प्रवृत्तिका अधिराजकुमार भएकाले पारस मार्फत दिपेन्द्र प्रयोग भएको अनुमान गर्दै प्रचार पनि गरिएको थियो । तर, दरबार सुत्रले सो कुरा पूरै खारेज गरी त्यो दुःखद घटना तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रबाट भएको संप्रेषित भएको थियो । युवराज दिपेन्द्रको विवाह चर्चा घटनाको पृष्ठभूमि र उनको बहुलठ्ठीपनले नै दरबारहत्याकाण्ड हुन पुगेको कुरा बढि सार्वजनिक भएका थिए । तर, सँगै रहेका पारश साह र डा. राजीव शाहीलाई गोली नलाग्नु, दिपेन्द्र स्वयमको पिठ्यूमा गोली हुनु र वीरेन्द्रका वंश मात्र मारिनुले शंसय गर्ने ठाउ प्रसस्तै रहेको थियो ।
घटनापछि तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुन्न’ भन्ने शिर्षकमा लेख लेखेर कान्तिपुरमा छपाए भने छाप्ने सम्पादक युवराज घिमीरे नै प्रहरी खोरमा पुगे । घटनाको प्रतिक्रिया विभिन्न ढङ्गले आउनु स्वभाविक रहेपनि ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको’ भन्ने उखानलाई राज्यले जोड्यो । नशाले लठ्ठ परेका दिपेन्द्रले कसरी अचुक निशाना लगाउछन् भन्ने प्रश्न दरबार बिज्ञ मानिने डा. सानुभाइ डंगोलले गरेको भनेर संप्रेषित पनि भएको थियो । राजाको अवशान पछाडि देश शोकाकुल भएको तत्कालिन यर्थाथताले विरेन्द्रको लोकप्रियता निकै उच्च रहेको स्पष्टै थियो । घटनामा विरामीहरुको स्वास्थ्य भन्दा सुरक्षा र गोपनियतालाई बढी ध्यान दिइएको भन्दै डा. अरुण सायमी लगायतका चिकित्सकहरुले पनि घटना रहस्यपूर्ण नै भएको बताएका थिए ।
वीरेन्द्रको वंशनास भएको ठिक ७ वर्षपछि अर्थात् २०६५ जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छाडेर गए । विना रक्तपात राजाले गद्दि छाडे । गणतन्त्र घोषणा नहुन्जेलसम्म तारो बनेका ज्ञानेन्द्रप्रतिको आक्रमण २०६५ जेठपछि क्रमश मत्थरीदै गयो । राजीव गान्धी हत्याराको वास्तविक छानविन हुन नसकेको र नेपालमै जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु तथा विस्वका अन्य घटना हेर्दा राजदरबारको हत्याकाण्डको सहि जाँचबुझ र सहि प्रतिवेदनको अपेक्षा खासै गरिएको थिएन । तर, वीरेन्द्रप्रति जनताको उच्च श्रद्धा र घटनाको प्रकृतिले हत्यारा पत्ता लगाउनै पर्छ भन्ने जनदवाव भने चर्को थियो ।
विज्ञहरुका अनुसार यस्ता घटना साम्य हुन सक्छन तथा कालान्तरमा छताछुल्ल आउन पनि सक्छन् । नेपालको सम्बन्धमा सन्तुलन र संक्रमणताको आरोह अवरोहले घटनाको यर्थाथता ढिलो चाडो आउने अपेक्षा अझै सार्वजनिक भएका छन् । चाहे मदन आश्रितको होस्, चाहे विरेन्द्रको परिवारको होस् । ‘बुढी मरी होइन ः काल पल्केला’ की भनेर पिरलो लिनु भने सबैले जरुरी छ ।